Ama-Sanctuaries Tour Odisha | Ama-Sanctuaries ase-Wildlife kanye namaPhakethe kazwelonke
I-Odisha inezinhlawulo eziningi zehlathi eziye zahlonywa kamuva. Kodwa nanamuhla, enye yezinto ezikhangayo kunazo zonke yizindawo eziningi ezibonakalayo ezingokwemvelo ezingokwemvelo ezinikezela indawo evikelekile nendawo yemvelo ezilwaneni zasendle ezihle kakhulu. Kunezindawo eziningi zokuhlala zasendle e-Odisha njengeSimlipal National Park, iChilika Lake, iBhitarkanika Wild Life Sanctuary, i-Nandankanan Zoological Park, i-Ushakothi Sanctuary, i-Satkosia Sanctuary, i-Baisipalli Wildlife Sanctuary, i-Ambapani Sanctuary, i-Khalasuni Sanctuary ne-Balukhand Sanctuary, njll. Vakashela u-Odisha uphinde uhlole i-flora ekhethekile kanye nezilwane ezinamathempeli ohambo olusha u-Odisha
I-Bhitarkanika Wildlife Sanctuary:
Spread phezu indawo engamakhilomitha angamakhilomitha angama-672, itholakala ngaphansi kwesifunda se-Kendrapara se-Odisha. Imfuyo enkulu eBhitarkanika yi-ingwe, ikati lokudoba, i-hyena, i-jungle cat nezinye eziningi. Jabulela izivakashi ze-Wildlife izikebhe ze-Odisha ngesikebhe.
I-Similipal National Park:
Kutholakala ngamakhilomitha angu-320 kusuka enhloko-dolobha yaseBhubaneswar engxenyeni esenyakatho-mpumalanga ye-Odisha, i-Simplipal National Park eMeyurbhanj esifundeni, yabizwa ngokuthi ihlathi eligcinwe yizilwane ngonyaka we-1973.
I-lagoon yamanzi enogwini e-Bay of Bengal futhi engaseningizimu yomfula uMfula iMahanadi, iChilika Lake yilona libi elikhulu kunogwini lwaseNdiya.
I-Nandankanan Zoological Park:
I-Nandankanan Zoological Park, esungulwe ku-1960 endaweni engamakhilomitha angama-14.16 isendaweni yaseKhurda e-Odisha ngaphandle komuzi waseBhubaneswar.
I-Satkosia Sanctuary iyi-oasis yemifino eluhlaza okwehliswa emkhathini okhululekile wamakhilomitha angama-745.52 emadolobheni ase-Angul, Nayagarh nasePhulbani. Ingcweti yaba khona ngonyaka we-1976 futhi iyabanjwa nabo bonke abathandi bemvelo, abathandi bezilwane zasendle kanye nama-freak freaks.
Kunezindawo eziningi ezingcwele ezindaweni ezihlukahlukene ze-Odisha njengeGahirmatha Marine Sanctuary, i-Chandaka-Dampara Wildlife Sanctuary, iBalukhand-Konark Wildlife Sanctuary, i-Hadagarh Wildlife Sanctuary, i-Baisipalli Wildlife Sanctuary nezinye eziningi ......
Inquiry / Xhumana Nathi